इंग्ल्याण्ड र स्वीडेनबीचको खेल शुरु, कसले मार्ला बाजी ? - Everest Dainik - News from Nepal
इंग्ल्याण्ड र स्वीडेनबीचको खेल शुरु, कसले मार्ला बाजी ?
मस्को । रुसमा जारी विश्वकप फुटबल अन्तर्गत क्वाटरफाइनलको तेस्रो खेलमा अहिले इंग्ल्याण्ड र स्वीडेनबीचको खेल शुरु भएको छ ।
इंग्ल्यान्ड पूर्वविश्व विजेता हो भने अहिलेसम्म उपाधि चुमेको छैन । इंग्ल्याण्ड र स्वीडेनबीचको खेल समरा रंगशाला जारी छ ।
इंग्ल्यान्ड दोस्रो पटक उपाधि उचाल्ने दाउमा छ भने स्वीडेन इतिहास रच्दै उपाधि चुम्ने दाउमा ।
याे पनि पढ्नुस बेल्जियम र इंग्ल्याण्डबीचको पहिलाे हाफ १–० मा सकियो
ट्याग्स: England Vs Sweden, world Cup 2018